အမျိုးသမီးများအတွက်ရပ်ဂ်ဘီတီရှပ်၊ သင်၏ဗီရိုအတွင်းရှိပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည် ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » အမြိုးသမီးမြားအတှကျရပ်ဂ်ဘီရှပ်အင်္ကျီ, သင့်ဗီရိုတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှု
အဆိုပါတီရှပ်တစ် timeless အပိုင်းအစ, သူမ၏ဗီရိုထဲမှာရှိသည်ဖို့စစ်မှန်သောဂန္ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်ပါတယ်သမျှကိုလည်းသင့်ရဲ့စတိုင်တစ်ခုအကြီးပိုင်ဆိုင်မှုသည်။ sexy ရပ်ဘီ တစ်ရှပ်အင်္ကျီ polycotton, ရိုးရှင်းပြီးအလွန်ထိရောက်သောအတူမီးမောင်းထိုးများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ပျော့နှင့်အဆင်ပြေတစ်ဦးက timeless ရှပ်အင်္ကျီ,
S က, M, L, XL နှင့် XXL အတွက်ရရှိနိုင်ပါကအားလုံးအမြိုးသမီးမြားစုံလင်သောအဝတျကိုရှာဖွေခွင့်ပြုပါတယ်။ မီးခိုးရောင် mottled, မှောင်မိုက် mottled မီးခိုးရောင်နှင့် mottled ရေတပ်: ဤအခြေခံ crewneck သည်အတိုင်း, သုံးအရောင်ကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။ သင်တို့၏သက်သာသည် 65% polyester နှင့် 35% ဝါဂွမ်းနှင့်အတူအရောအနှောဖြစ်သော Poly မှဖန်ဆင်းသည်။ အဆိုပါထည်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါသည်: 150 g / m²။ နှင့်ဤဖွဲ့စည်းမှုအားလုံးခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဒါဟာအဆင်ပြေပြီးအလွန်ပျော့ပျောင်းသောအဝတျကိုလုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အမြိုးသမီးမြားအဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏တီရှပ်သင့်ရဲ့ဗီရိုဖြည့်စွက်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်တောက်ပ, ကသင့်ရဲ့ဗီရို၏ကျန်တွေနဲ့အခက်အခဲမရှိဘဲပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအစနှင့်အတူအလွန်ကောင်းစွာပေါင်းစပ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးများအတွက်ချွေးထွက် hoodie ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်နှင့်၎င်း၏အများအပြားအရောင်များ၌သင်တို့ထံသို့ခေါ်ခဲ့ပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူ ဖလားဂျာစီ !
အမျိုးသမီးများပူနွေးသောရာသီဥတုပြန်စဉ်ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏ဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဘောင်းဘီတိုနှင့်အတူဤရှပ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးစကတ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဗီရိုအပေါငျးတို့သဆက်စပ်ပစ္စည်းအတူကပေါင်းသင်းနိုငျပါသညျ! ဒါဟာတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးအပေါင်းတို့နှင့်ရာသီအတွက်ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ဒါဟာသမျှသူတို့ရဲ့စတိုင်လ်, တနျဖိုးရှိအမျိုးသမီးများတတ်၏။ လူအပေါင်းတို့၏အများဆုံးဂန္: ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် Sneaker သို့မဟုတ် Sneaker တရံနှင့်အတူပေါင်းစပ်သည့်တီရှပ်!
သင်ကိုယ်တိုင်ဆက်ဆံဖို့လိုခငျြသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်များအတွက်မူရင်းဆုကြေးဇူးကိုကိုရှာဖွေနေပါသလား ဆိုင်ရဲ့ style အပေါ် Bet sexy Rubgy နှင့်သစ်ပင်အောက်တော်တော်မတ်မတ်လျှော: သူတို့သည်သင်၏ချစ်ရသူမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်။
timeless "ဒီရပ်ဂ်ဘီချွေးထွက် unisex,
ရှပ်အင်္ကျီရပ်ဘီကမ္ဘာ့ဖလား - ဂျပန် 2019 "